Agha Window ... Ọnọdụ, Ọnọdụ, Ọnọdụ | Martech Zone
Agha Window… Ọnọdụ, Ọnọdụ, Ọnọdụ
Tọzdee, Septemba 14, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Nke a bụ foto nke Obodo Bara Uru na US31 South nso ebe m bi na Greenwood. Rịba ama na drab digs… dịghị windo, egwu na agba, niile ihe brik… adịghị adọrọ adọrọ. Ana m arịọ mgbaghara maka foto ndị a, ha anaghị adị na ekwentị m.
Nke ahụ bụ, ruo mgbe Ngwongwo Ashley kwagara n'okporo ámá. Ebe dị ezigbo mma - na-abụbu ụlọ ahịa egwuregwu. Ashley nwere nnukwu ọnụ ahịa na ụlọ ahịa ahụ bụ ihe ịtụnanya… tinyere mgbakọ egwuregwu Playstation maka ụmụaka gị igwu egwu, TV buru ibu maka di ya igwu egwu… na nri mmanya nke nwere kuki na kọfị n'efu.
Ya mere, ihe Bara Uru City na-eme? Ha bidoro site na igbutu akuku ụlọ ahịa ahụ wee degharịa ya na windo sara mbara iji hụ ihe dị n'ime ya.
Ma ha hụ na ụfọdụ windo ndị ahụ chere ihu n'ihu nke Ashley:
Ma ibe de resistance? Oui. Ha rere n'ezie otu ala n'ọdụ ụgbọ ala ebe ụlọ ọhụrụ na-anọdụ, nke ahụ na-egbochi echiche Ashley si n'okporo ụzọ awara awara.
Chaị. Ugbu a bụ agha mkpọsa! Echere m na ha anaghị egwu egwu mgbe ha kwuru “Ọnọdụ, Ọnọdụ, Ọnọdụ!”. Site n'ụzọ, Echere m na Ashley nwere ike ịmịnye ya ntakịrị site na akara ahụ buru ibu # 1. 🙂
N'ike mmụọ nsọ: Tom Peters
Kedu mgbe CAN-SPAM ga-esi gbanwee email gara aga?
Sep 15, 2006 na 6: 21 AM
Ọ dị mma tupu na eserese, na ee, nke ahụ bụ agha!